प्रतीक्षालयमा सबैका समुन्ने सुसु तुर्क्याएपछि… « News of Nepal
प्रतीक्षालयमा सबैका समुन्ने सुसु तुर्क्याएपछि…
काठमाडौं । प्लेन चढ्ने हतारो सबैलाई छ। सबै जना प्रतीक्षालयमा कुरिरहेका छन्। प्लेनमा चढ्न आग्रह गर्ने बेला हुनै लागेको छ। यस्तोमा सबै अधैर्य भइरहेका छन्। तर एक जना यात्रु भने आफू बसिरहेको ठाउँमा पेन्टको जिपर खोल्छन् र त्यहीँ तुर्क्याउँछन्, सुसु ! छेउका मानिसहरु अचम्म र उदेक मानेर केही क्षण हेर्छन्, अर्को क्षण लाज मान्छन्। यतिबेला यो भिडियो इन्स्टाग्राममा निकै भाइरल भइरहेको छ।
भाइरल भिडियोमा पोस्ट गर्ने व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘पिस् अफ, २०१९ १ अर्को वर्ष भेटौँला !! (अँ, यो हवाई यात्रुले टर्मिनलमा प्लेन कुर्दाकुर्दै सुइँक्याएको हो ! कस्तो लाज पचेको !) तीन लाखभन्दा बढी मानिसले यो भिडियो हेरिसकेको भए पनि तल टिप्पणी गर्नेहरुले लेखेका छन्, ‘छ्या ! कस्तो कार्बाही नगरेको होला !’ कार्बाही त परेको कुरा, कुन विमानस्थलमा यस्तो घटना घटेको हो समेत नखुलेका कारण यसबारे टिप्पणी गर्नु बेकार रहेको केहीको धारणा पोस्ट मुन्तिर देखिन्छ।
अर्को एउटा भिडियो ट्वीटरमा पोस्ट गरिएको छ, जसमा एउटी महिलाले आफ्नो गोडाको बूढी औँलाले प्लेनको सिटअगाडिको स्क्रिनलाई टच गर्दै फिल्म छानिरहेकी छन्। यो भिडियो पोस्ट गरेपछि उनले लेखेकी छन्, ‘यिनको बूढी औँलामा पक्कै पनि ब्याक्टेरिया थियो होला ! अब अर्को प्यासेन्जरले हातले स्क्रिन स्वाइप गर्दा त्यो ब्याक्टेरिया सर्ने होला ! हामीलाई सामान कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि कस्तो थाहा नभएको होला ?’ केहीले सो भिडियोमाथि टिप्पणी गरेका छन्, ‘तिनको हात नहुन पनि त सक्छ ! अनि सबैको गोडामा ब्याक्टेरियाको घर हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ?’